Adobe Color: Izay rehetra tsy fantatrao momba ny fandalinana ny loko | Famoronana an-tserasera
Izay rehetra tsy fantatrao momba ny fandalinana loko
Cristina Zapata | | Palety miloko
«Colours» avy amin'i arjun.nikon dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-SA 2.0
Tombanana fa afaka manavaka loko mihoatra ny ... 10 tapitrisa ny mason'olombelona! Ny fahafantarana ny mampiavaka azy dia afaka manana hevitra maro hafa ho an'ny zavatra noforonintsika isika, na amin'ny hosodoko, haingon-trano, famolavolana sy izay rehetra azo ampiharina amin'ny loko.
Ny fandokoana dia nodinihin'ireo filozofa, mpahay siansa, psikolojia, mpanakanto ... nandritra ny tantara. Azontsika atao ny miresaka momba ny fananany, ny boribory chromatic, ny karazana loko arakaraka ny mason-tsivana maro, ny mizana mizana, ny vokany ara-tsaina ... ary ny maro sns.
Hamboarintsika tsirairay avy ireo toetra eto ambany.
1 Ny faribolana chromatic
2 Ny fananan'ny loko
3 Ambaratonga kromatika
4 Fifanarahana loko sy Adobe Color
5 Ny vokatry ny loko amin'ny olombelona
Ny faribolana chromatic
Ny faribolan'ny chromatic dia fanehoana sary an'ireo loko izay potiky ny jiro miharihary. Izy io dia afaka maneho ny loko voalohany na koa ny loko faharoa sy fahatelo. Tsy misy koa ny fotsy (ny fitambaran'ny loko voalohany) na ny mainty (ny tsy fisian'ny hazavana).
Loko Kilonga: tsy azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fampifangaroana loko hafa.
Loko faharoa: izy ireo dia miforona amin'ny alàlan'ny fampifangaroana loko roa voalohany.
Loko tersy: izy ireo dia mifangaro miaraka amin'ny loko voalohany sy faharoa.
Misy faribolana maro loko samy hafa miankina amin'ny famaritana ny lokony voalohany amin'ny pigment voajanahary (raha ny loko), ny efijery (raha ny endrika na ny sary) na ny fidiran'ny mpanonta.
Kodiarana miloko ho an'ny loko (RYB): mampiasa loko nentin-drazana, ny voalohany dia mena, mavo ary manga.
Kodiarana miloko ho an'ny famolavolana na sary (RGB): mampiasa loko maivana, mena sy maintso ary manga izy ireo.
Kodiarana miloko ho an'ny mpanonta (CMYK): mampiasa loko loko, dia ny Cyan, Magenta ary Yellow. Amin'ity tranga ity, ampidirina ny ranomainty mainty hamoronana hamafisana bebe kokoa.
Ny fananan'ny loko
Ny loko dia manana toetra telo: ny lokony, ny mahasosotra ary ny famirapiratany.
Hue: manavaka loko iray amin'ny iray hafa, manondro ny fiovana kely amin'ny feo ataon'ny loko iray ao amin'ny boribory chromatic amin'ny faritra akaiky azy. Misy loko maro miankina amin'ny volony. Noho izany, ao anatin'ny tonony mena, azontsika atao ny manavaka ny lokony mena: mena, amaranto, carmine, vermilion, garnet, sns.
saturation: dia ny haben'ny volondavenona misy loko, izay mamaritra ny haben'ny hateviny. Arak'izany, arakaraka ny maha avo ny saturation, ny hamafiny bebe kokoa ary ny habetsahan'ny volondavenona ao aminy.
famirapiratana: Ny haben'ny hazavana taratry ny loko iray, izany hoe, mazava na maizina. Arakaraka ny maha avo ny jiro no ahitanao ny hazavany.
Rehefa miovaova ireo fananana etsy ambony ireo dia mamorona ambaratonga chromatic. Ity refy ity dia mety ho achromatic koa.
Chromatic: Afangaro amin'ny fotsy na mainty ny loko madio, ka miovaova ny hamirapiratra, ny mahavoky ary ny volony.
Achromatic: Grayscale manomboka amin'ny fotsy ka hatramin'ny mainty.
Fifanarahana loko sy Adobe Color
Ny fihavanana eo amin'ny loko dia noforonina rehefa misy singa iraisan'ny sasany. Azontsika atao ny manasongadina ny programa Adobe Color amin'ity lafiny ity, satria hahafahantsika mamorona paleta miloko marobe marobe, manatrika ireo fifandraisana samihafa izay ho hitantsika etsy ambany.
Loko mitantara: loko mifanila amin'ny loko voafantina amin'ny kodiarana miloko.
Loko monochromatic: dia ny aloky ny loko.
Triad ny loko: izy io dia ho loko telo mitovy habe amin'ny boribory chromatic, izay mifanohitra tanteraka amin'ny tsirairay. Ohatra ny loko voalohany.
Loko mifameno: izy ireo dia loko izay hita amin'ny fomba mifanohitra amin'ny boribory chromatic.
Ary snsetera lava.
Ny vokatry ny loko amin'ny olombelona
Ny vokany ara-psikolojika vokarin'ny fampiasana loko isan-karazany amin'ny olombelona dia nodinihina ihany koa. Misy fiantraikany amin'ny zava-misy fa nandritra ny tantara dia nifamatotra tamin'ny hetsika isan-karazany ny loko, mamindra ny dikany ara-kolontsaina. Amin'ny kolontsaina andrefana:
Blanco: fihavanana, fahadiovana. Ny hatsiaka ihany koa, ny fahaverezana.
mainty: zava-miafina, kanto, be pitsiny. Ary koa ny fahafatesana, ratsy.
Rojo: filana, firaisana ara-nofo, fahavelomana.
Verde: natiora, fahasalamana, fifandanjana.
Azul: fitoniana, fanoloran-tena.
Rosa: fahatanorana, fahalemem-panahy.
Inona no andrasanao manomboka mamorona paleta miloko mirindra amin'ny asanao ary miteraka ny vokatra tadiavinao amin'ny hafa?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Palety miloko » Izay rehetra tsy fantatrao momba ny fandalinana loko